'patatil' တပ်၏တပ်စခန်းသည်အဆုံးသတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများကိုဝေးကွာသွားစေရန်ကောင်းမွန်သောနှင့်အံ့သြဖွယ်လှည့်ကွက်တစ်ခုပေးရန်ကမ်းလှမ်းသည်။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: 400 ဂရမ်။ ၀ က်သားအသား ၁၀၀ ဂရမ်ဝက်သားဗိုက် ၁/၂ ကီလိုဂရမ်စည်သွတ်ခရမ်းချဉ်သီး ၁/၄ ကြက်သွန် ၁ လေးညှင်းလေး ...
အိမ်လုပ်လှည့်ကွက်နှင့်အတူ Ramen (Naruto ကိုစားသောအရာကို)
ဟုတ်ကဲ့, ramen များကို Naruto အလွန်စားသောရှည်လျားသောခေါက်ဆွဲများဟုခေါ်ပြီးသင်တို့၌ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ကလေးများရှိမရှိသင်သေချာစွာသိလိမ့်မည်။
အရသာတွေအများကြီးရှိတဲ့ငါးကိုစားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု။ ပုံမှန် Andalusian ဟင်းလျာကို marinated ငါးများ၊ ဘားများစွာတွင်၎င်းသည် tapas ဖြစ်သည်။
Monkfish သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောငါးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးရလဒ်ကောင်းများရရှိပြီး၎င်းကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပင်လယ်စာများ၊ အသားများနှင့်ရောစပ်နိုင်သည်။
ဒီနေ့ဒီပွဲတော်ကိုတစ်နေ့အမြဲတမ်းအသင့်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ပန်းကန်တစ်ချပ်ကိုကျွန်တော်ယူလာပါပြီ။ ငံပြာရည်ထဲမှာပုစွန်တွေပါတဲ့ Monkfish ပန်းကန်တစ်ခု၊
ပါဝင်ပစ္စည်းများ 20g မုန့်ဖုတ်မှုန့်½နို့လီတာ ၁၀၀ ဂရမ်နို့မှုန့်နို့ထွက်အပင်မှ ၁၀၀ ဂရမ်အဖြူ ၁၀၀ ကိုမြည်းစမ်းရန်
ခေါက်ဆွဲ၏မူလအစဗားရှင်းများစွာရှိသည်။ တစ်ခုမှာမာကိုပိုလိုသည်သူ၏အရှေ့ဘက်သို့ (ပြန်လာသည့်) ပြန်လာချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
walnut ဆော့စ်နှင့်အတူ Ravioli
Ravioli ဟင်းခတ်အခွံပါသောခေါက်ဆွဲကြော်၊ ဤအရာများသည်ဆိတ်ဒိန်ခဲနှင့် caramelized ကြက်သွန်၊ အလွန်ကောင်းသောအရသာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ရဝိုင်းရိုးရှင်းသောနှင့်ကျန်းမာတဲ့ပန်းကန် ခေါက်ဆွဲကိုလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ပြီးအစားအစာများစွာစားပြီးနောက်သူတို့ပျော့ပြောင်းပြီးပိုမိုပေါ့ပါးသောဟင်းလျာများကိုလိုချင်သည်။ …
Neapolitan အဘိဓါန်ငံပြာရည်နှင့်အတူတူနာ ravioli
Neapolitan အဘိဓါန်ငံပြာရည်မဆိုခေါက်ဆွဲပန်းကန်မှအံ့သြစရာပူးတွဲပါ။ spaghetti, macaroni သို့မဟုတ် ravioli or tortellini စသည့်ခေါက်ဆွဲများဖြစ်စေ ...
lasagna ပြားနှင့်အတူဟင်းနုနွယ်ရွက် ravioli
သင်အရသာရှိတဲ့ ravioli ကိုပျော်မွေ့ချင်ပေမယ့်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခန်းထဲမှာသင့်မှာမရှိဘူးလား။ ဒီဟာက ...
မှိုငံပြာရည်နှင့်အတူဟင်းနုနွယ်ရွက် ravioli, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခေါက်ဆွဲစာရွက်။ အဘယ်သူသည်ကောင်းသောခေါက်ဆွဲပန်းကန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်လော အများအားဖြင့်ခေါက်ဆွဲ ...
အချိန်သည်ချက်ပြုတ်ရန်မဟုတ်သည့်ဆင်ခြေမဟုတ်ပါ၊ ဤစာရွက်သည်သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ ခေါက်ဆွဲတစ်ခွက်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တစ်မျိုးတည်းဖြင့် ...
အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဒိန်ချဉ်ကိတ်မုန့်များအတွက်စာရွက်ကိုသိပြီးပြီ။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအလွန်ဆွဲဆောင်မှု။ ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကို "မတူကွဲပြားတဲ့" အရာတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဖို့ငါတို့ထည့်လိုက်ပြီ ...
ငါအုတ်မုန့်စိမ်းပြားတွေကိုနှစ်သက်တယ်မဟုတ်လား ငါအမြဲတမ်းရေခဲသေတ္တာထဲမှာအထုပ်တစ်ခုအမြဲရှိသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့များနှင့်ရလဒ်များကို ...
အသက် ၆ လမှ ၈ လကြားကလေးငယ်များသည်အစိုင်အခဲအစားအစာများကိုစတင်စားသောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဒါကမဆိုလိုပါဘူး
ကြော်သစ်သားကြော်၊ ရိုးရာ tapa ကြော်
Andalusia ၏အရက်ဆိုင်နှင့်ကန္တာရများတွင်လူကြိုက်များသော tapa တစ်ခုရှိလျှင်၎င်းသည်ငါးကြော်ဖြစ်သည်။ ဒီ Tapas အမျိုးအစားထဲမှာငါတို့ ...
ကြက်သား fideua စာရွက်
ရက်ပေါင်းများစွာပျက်ကွက်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသောကြောင့်ယနေ့ငါသည်သင်တို့ကိုအရသာရှိပြီးအလွယ်တကူပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ ဒါဟာကြက်သားနှင့်အတူ fideua များအတွက်စာရွက်ဖြစ်ပါသည်, ...
ကိတ်မုန့်များအတွက်အထူးအိမ်လုပ် fondant စာရွက်
Fondant ကိုမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအထူးသဖြင့်ကိတ်မုန့်များအလှဆင်ရာတွင်အလှဆင်စားစရာမုန့်စိမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ၏အခြေခံပုံသဏ္...ာန် ...
pastry မုန့်နှင့်ပြည့်စုံကြော် cookies များကိုအဘို့အစာရွက်
ခရစ်စမတ်သည်ပိုမိုရိုးရာသကြားလုံးများကိုပြုလုပ်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ puff pastry, pestiños, angel hair dumplings, cookies, etc ။
Gulas al ajillo စာရွက်၊
ဒီကနေ့လူတွေကိုသင့်အတွက်စာရွက်တစ်ရွက်ချန်ထားလိုက်တယ်၊ သူတို့ရဲ့အလုပ်ကြောင့်သူတို့ဟာအလုပ်ကြိုးစားတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းတွေမလုပ်နိုင်ကြတဲ့အတွက် ...
အလျင်အမြန် scrumpbled ကြက်ဥစာရွက်, scrumptious
ယနေ့ငါစပိန် gastronomy များအတွက်အလွန်ရိုးရာစာရွက်, ကြက်ဥကျိုးနှင့်အတူအာလူးကြော်ပြင်ဆင်ပြီ။ ဒီပန်းကန်သည်မည်သည့်အတွက်မဆိုအလွန်အသုံးဝင်သည်။
Valencian paella စာရွက် - Paella de la Parreta
သဘာဝ၊ ထူးခြား။ မပြောင်းလဲနိုင်သောပါဝင်ပစ္စည်းများ - ဆန်၊ အပျိုကညာသံလွင်ဆီ၊ ကြက်၊ ယုန်၊ ferraura သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သောအစိမ်းရောင်ပဲ၊ ဘူး၊ ပဲ၊
Bilbao ထံမှ Mackerel ခါးစာရွက်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ:2အထပ်သား mackerel ။4အလတ်စားအာလူး။3ကြက်သွန်ဖြူ။ 1 ငရုတ်သီး အပျိုစင်သံလွင်ဆီ။ ဆားရှလကာရည်နှင့် parsley အဘိတ်: ငါတို့အဝတ်လျှော်, အခွံနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့်စတင် ...
Panacota စာရွက် (panna cotta)
ထိုရက်သတ္တပတ်ကို ၀ မ်းမြောက်စွာဖြင့်စတင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အီတလီဒေသ Piedmont မှပင့်ကူအချိုပွဲဖြစ်သည်။
Patatas bravas စာရွက်၊
ဒီနေ့စပိန် gastronomy ကိုသင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာလေ့လာနိုင်ရန်သင့်အားပုံမှန်စပိန် tapa ကိုတင်ပြသည်။ ဒီလိုမျိုး,…
Roteñaငါးစာရွက်, Rota ပုံမှန်ပန်းကန် (ကာဒစ်)
ဒီနေ့မှာတော့ငါဟာကာဒစ်ပြည်နယ်ရှိ Andalusian စည်ပင်သာယာရာတာမှအလွန်ပုံမှန်ပန်းကန်တစ်ချပ်ကိုတင်ပြချင်တယ်။ သူတို့အရသာရှိတဲ့ငါးတွေအကြောင်းပါ။
ပုံမှန် Cadiz စာရွက်သည်ငရုတ်သီးကြော်ဖြစ်သည်။ ဒီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအာဟာရတွေအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးတာကြောင့်အရမ်းကျန်းမာပါတယ်။
Ratatouille စာရွက်, ကောင်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူအပတ်ကစတင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးပြည့်ဝတဲ့စွမ်းအင်ပြည့်ဝအောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ratatouille အတွက်ချက်ပြုတ်နည်းကိုပြင်ဆင်ချင်တယ်။ ပစ္စတိုသည် ...
ကြက်သားစာရွက်သည်အောင်မြင်ရန်လွယ်ကူသည်၊ အထူးသဖြင့်အိမ်တွင်ကလေးများရှိလျှင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်သူတို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၏ကြီးမားသောအားသာချက် ...
Chai သို့မဟုတ် masala chai လက်ဖက်ရည်သည်စပိန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများ၌နာမည်ကြီး Starbucks မှတစ်ဆင့်အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့အဘွားကငါတို့လုပ်သောမုန့်ကိုအမှတ်ရပြီးနောက်တဖန်ဘယ်တော့မှမြည်းကြည့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ ဒီနေ့ကျွန်တော်အရမ်းလွယ်တဲ့စာရွက်ကိုယူလာပါပြီ ...
အလင်းနည်းနည်း - ငှက်ပျောနှင့်သစ်တော်သီးဖျော်ရည်
nutridieta.com မှသင့်အားငှက်ပျောသီး၊ သစ်တော်သီးများဖြင့်အလင်းရောင်နည်းနည်းဖြင့်သယ်ဆောင်ပေးသည်။ Ingredients: 500g ။ ငှက်ပျောသီး။ 500 ဂရမ်။ သစ်တော်သီး၏။ 500cc ။ နို့မှုန့်။ ဇွန်း ၃ ခု ...
မုန့်ညက်၊ ကြက်ဥနှင့်နို့အပေါ် အခြေခံ၍ အလွန်ရိုးရှင်းသောခေါက်ဆွဲခြောက်နှင့်မွှေးသောအရသာရှိသောပေါင်းစပ်မှုပေါင်းတစ်ထောင်နှင့်ပေါင်းစပ်။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပေါင်းစပ်စေသည်။
ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်း - Dulce de Leche Parfait
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အနံ့ gelatin,7ဂရမ်။ အနှစ်,3ဝီစကီ, 80 cc Dulce က de leche, 450 ဂရမ်။ နို့မုန့်, ​​500 cc အဘိတ်: ချိုမြိန်ထား ...
နွားနို့တွင်ပါဝင်သောအသားများသည်မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ငါတို့ကိုပြင်ဆင်ခွင့်ပေးတဲ့အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအသား ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အမဲသားလှည့်လည် 1 ကီလိုဂရမ်ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့်2ကြက်သွန် 1 ဟင်းရည်တစ်ခွက်ဝိုင်ဖြူ 1 ဖန်ခွက် 1 ဇွန်း ...
မှိုနှင့်အတူ round beef
ဤအားလပ်ရက်များမှအစာများကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်မှိုနှင့်အတူအမဲသားစားရန်အဆိုပြုချက်ကိုသင်တို့အားငါထားခဲ့၏။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဟင်း ...
ဒီနေ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားတဲ့အရသာရှိတဲ့ကျန်းမာတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းကိုယနေ့ငါယူလာပေးတယ်။ ဒါကစာရွက်ပါ ...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အမဲသားပေါင် ၁ ကီလိုဂရမ်မြေငရုတ်ကောင်း ၁ ဇွန်း ၁ နှင့်မွှေးကြိုင်သော paprika ၁/၂ ဇွန်းကြက်သွန်နီအဆီ ၃၀ ဂရမ်ဆီ။
မည်သည့်မုန့်ညက်နှင့်အတူလိုက်ပါရန်, သင်သည်ဤဆိုဒါပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ:2လိမ္မော်သီး 1 သံပုရာ 200 ဂရမ်။ cognac ၏ ၁/၂ ဖန်ခွက်စတော်ဘယ်ရီ ၁ ကီလို ...
Petisus, susos သို့မဟုတ် profiteroles တူညီတဲ့အခြေစိုက်စခန်း, choux pastry နှင့်အတူလုပ်နေကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးတွင်မတူညီသောပုံစံများနှင့်ဖြည့်စွက်မှုများရှိသည်။
သင့်တွင်ရိုးရှင်းသော prepare ည့်ခန်းပြင်ဆင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်သာရှိပြီးသင်၌အဖြူသို့မဟုတ်အနီရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်တစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းချက်ပြုတ်ပါ။
အလျင်စလိုန်ကြက်ဥများသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏မီးဖိုချောင်တွင်များသောအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်တတ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းသောအပေါင်းအဖော်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ညစာစားပွဲကဲ့သို့ကောင်းစွာသွားကြသည်၊
အာလူးနှင့် zucchini နှင့်အတူအလျင်အမြန်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: zucchini ၏ 600 ဂဂရမ်အာလူး 150g ကောက်ရိုး ၃ ဥဥသံလွင်ဆီကုန်တယ် parsley ၏ဇွန်း ၂ ကြက်သွန်ဆားအဘိတ်: zucchini သန့်ရှင်း ...
ကြက်ဥနှင့်အတူ zucchini နှင့်အတူအလျင်အမြန်
မှိုများနှင့် zucchini နှင့်အတူအလျင်အမြန်
ဤဥယျာဉ်သည်ယခုရာသီတွင် zucchini ဖြင့်ရက်ရက်ရောရောပြုလုပ်နေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောချက်ပြုတ်နည်းနှစ်ခု၊ သုံးခုမပြင်ဆင်ရသေးသည့်အပတ်မှာ ...
ယနေ့ငါမှိုနှင့်ပုစွန်နှင့်အတူအလျင်အမြန်စေလွှတ်ကြက်ဥ, သင်ခဏပြင်ဆင်နှင့်အံ့သြဖွယ်ပန်းကန်ကိုဖြစ်စေနိုင်ရိုးရှင်းတဲ့စာရွက်အဆိုပြုထား။ စာရွက်တစ်ရွက်…
Scrambled ကြက်ဥပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကစားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်; မှိုများ၊ crustaceans နှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုတွင်အသုံးများသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုတဲ့အချက်ကို ...
Spiced ပန်းဂေါ်ဖီ Scramble
ကျွန်ုပ်၏အိမ်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့်ပန်းဂေါ်ဖီနှင့်အတူအစားအစာများကိုများများစားစားမပြုလုပ်သော်လည်း (၎င်းသည်ဓာတ်ငွေ့ကြောင့်ဝမ်းဗိုက်ဖောင်းထွက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်) ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်သောအခါ၎င်းသည် ...
ငါသိ, ဟင်းနုနွယ်ရွက်များသောအားဖြင့်ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်မဟုတ်, ကလေးများမှကြွလာသောအခါအများကြီးလျော့နည်းသို့သော်၎င်း၏မြင့်မားသောသံပါဝင်မှု ...
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်မီနူးများ၌မိတ်ဆက်ရန်အမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးပြီး ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာဤမီနူးများသည်အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဟ…
Scrambled ကြက်ဥများသည်အလင်းရောင်ညစာစားရန်အမြဲတမ်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြပြီး၊ ခရစ်စမတ်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင်…
မည်သည့်အသားကိုမဆိုအထူးအရသာပေးသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည်ဝိုင်နီဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။ ဒီဟာကအလျင်အမြန် ...
ဥနှင့် zucchini နှင့်အတူအလျင်အမြန်
ဒီနေ့ချက်ပြုတ်နည်းဟာအစားအစာ (သို့) ညစာကိုအလျင်အမြန်၊ အလွယ်တကူနဲ့သုံးမျိုးပဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေ့မင်းကလွယ်ကူပြီးလက်ရာမြောက်တဲ့ညစာကိုယူလာပေးတယ်။ သငျသညျမှိုကိုကြိုက်လျှင်သင်မှိုနှင့်ပုစွန်နှင့်အတူဤအလျင်အမြန်စေလွှတ်ဤကြက်ဥကိုချစ်ကြလိမ့်မည်။ ဒီစာရွက်…
အရသာရှိပြီးရိုးရိုး risotto ပြုလုပ်ရန်ရှုပ်ထွေးသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်စားဖိုမှူးဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ မီးဖိုချောင်တွင်ချက်ပြုတ်ရန်မလိုပါ။
Risotto, လူတိုင်းသိကြလိမ့်မည်အဖြစ်, အခြေခံအခြေခံပစ္စည်းအဖြစ်ဆန်ရှိပါတယ်သောအီတလီနိုင်ငံအတွက်အလွန်ပုံမှန်နှင့်ရိုးရာစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ…
မှိုနှင့် walnut risotto
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အခွံမာသီးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မကြာသေးမီကသူတို့က ...
ဆန်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လောင်စာအဖြစ်စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အများဆုံးရှိသောအစားအစာထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ...
Risotto သည်ပူသောပန်းကန်ဖြစ်သည့်တိုင်နွေရာသီတွင်သင့်ဘက်ထရီများကိုအားပြန်သွင်းရန်အလွန်ကောင်းသည့်ပန်းကန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ risotto သည်အလွန်ကျန်းမာသည်။
ဒီကြက်သားနှင့်ခရမ်းချဉ်သီး risotto အားလုံးရှိပါတယ်; ၎င်းသည်အရောင်ရှိပြီးချောမွေ့ပြီးချောမွေ့သော texture ရှိသည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်မည်သည့်ပြicationsနာမျှမပါဝင်ပါ။
ဒိန်ခဲ risotto အီတလီ gastronomy ၏ရိုးရာပန်းကန်။ ဒီကိစ္စကိုမရှုပ်ထွေးစေဘဲရိုးရိုးသာမန် risotto ကိုဒိန်ခဲနှင့်အတူပုံမှန်စားသုံးစေသော risotto ကိုယနေ့ငါတင်ပြသည်။
မှိုနှင့် truffle risotto
သင့်မိသားစုကိုကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေမည့်မှိုနှင့် Truffle Risotto အတွက်စာရွက်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးပါမည်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများမှို 350g မှ 1 ...
မှိုရီစီတို၊ ပြီးပြည့်စုံသော Valentine စာရွက်
ဒီနေ့ Valentine's dinner မှာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့အတူမျှဝေဖို့အကောင်းဆုံး၊ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့စာရွက်ကိုဆောင်ယူလာပါပြီ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ - risotto အတွက်ဆန် ၅၀၀ ဂရမ်။ ပုစွန်အပင် ၄၀၀ မှို ၃၀၀ ကြက်သွန်နီ ၂ parsley ၁ လက်ကောက် ၁ ပေ leek သံလွင်ဆီအနည်းငယ်
ဆန်ပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်သည် creamy သို့မဟုတ် soupy ဆန်ဟင်းများကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ဆန်ပြင်ဆင်နေသည့်ဆန်ကဲ့သို့ဆန်
ယနေ့ငါကင်အမဲသား၏တစ်ယူသန်ဆန် (ကဲ့သို့ငါ) များအတွက်စံပြစာရွက်ကိုတင်ပြ: ပါဝင်ပစ္စည်းများ 1 ကီလိုဂရမ်နှင့်ကင်အမဲသား၏ 1/2 150 ဂရမ် ...
ဘုရားသခင့အင်္ဂလန်ကိုကယ်တင်! ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာငါဟာအိမ်မှာရှိခဲ့တယ်၊ ငါဘယ်လောက်အထိငါငြင်းဆန်ခဲ့မိလည်းငါအနည်းငယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့ငါ့အမိ ​​...
ဒီတနင်္လာနေ့မှာရိုးရှင်းတဲ့မြန်ဆန်တဲ့ချက်ပြုတ်နည်း၊ အရသာခံပြီးခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အသီးတွေ၊ ရိုးရာဟင်းတစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်အဆိုတင်သွင်းပြီးပါပြီ။
ခရစ်စမတ်အားလပ်ရက်များရောက်ခါနီးပြီ၊ ငါတို့ပြင်ဆင်လိုသည့်ဟင်းလျာများကိုစဉ်းစားနေပြီ။ အစာစားရန်စတင်ရန်ဘာကိုမလိုချင်သနည်း ...
ဒိန်ခဲနှင့်ပြည့်ကျပ်ပြင်သစ် omelette လိပ်
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲချက်ပြုတ်ကြသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သောအရာဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်မူရင်းသဘောသဘာဝကိုမဖော်ပြရန်ငြင်းဆန်သည်။ အဲဒါ ...
ယနေ့ငါကြက်သွန်နီနှင့်မုန်လာဥဆော့စ်ရှိအမဲသားလိပ်များအတွက်ဤအရသာချက်ပြုတ်နည်းကိုယူဆောင်လာချင်တယ်။ ဒါဆိုမင်းကရင်ခုန်စရာညစာစားပွဲမှာဒါမှမဟုတ် ...
ကညွတ်နှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက် gratin လိပ်
လွယ်ကူမြန်ဆန်သည်။ ဤစာရွက်သည်အဖြူကညွတ်ကို၎င်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုလဲတွေ့နိုင်တယ်၊
Puff pastry လိပ်
ရိုးရှင်းလွယ်ကူမြန်ဆန်ချိုသော။ puff pastry ပါသည့်သကြားလုံးများမှာအလွန်ကောင်းသည်။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်မည်သည့်အတွက်မဆိုအမြဲထားသင့်သည်။
ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲ puff pastry လိပ်
ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်ပြည့်စုံသောဤ puff pastry လိပ်များကိုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအရသာရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုအစေ့အစတစ်ခုအနေနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး ...
ဒီနေ့မှာဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲအချို့ကိုငါအဆိုပြုထားသည်။ ဤလိပ်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ ၎င်းတို့သည်အရသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုသင်စမ်းကြည့်ပါကသင်အောင်မြင်လိမ့်မည်။
York Ham သည်ဆန်နှင့်အတူ Rolls
ကောင်းမွန်သောခဲဖွယ်ခဲဖွယ်စားဖွယ်များမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်အနည်းငယ်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့စားနိုင်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေမှာကလေးငယ်တွေကအဲဒါကိုမမြင်ကြဘူး ...
သောကြာနေ့ညတိုင်းတွင်ချက်ချင်းညစာထွက်လာသည်။ ဂိမ်းတစ်ခုကြည့်ဖို့သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအလွတ်သဘောညစာ။ သင်ကစားစရာခန်းထဲမှာ rummage ...
ကြက်သားနှင့်ဒိန်ခဲသည်ကြက်သားစားရန်အရသာရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောလိပ်များသည်အလွန်အရည်ရွှမ်း။ အပြည့်ပါ ၀ င်သောဒိန်ခဲနှင့်ပြည့်နေသော
ကျပ်မီးခိုး salmon လိပ်
ဆေးကြောထားသောဆော်လမွန်လိပ်များ၊ အစာစားရန်စတင်ရန်အလွန်ကောင်းသောအရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်နိုင်သည့်မူလပန်းကန်ဖြစ်သည်။
Surimi ရိုင်းကညွတ်နှင့်အတူ Rolls
တခါတရံအိမ်၌ guests ည့်သည်များရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်အိမ်၌ guests ည့်သည်များရှိပြီးအစာပြင်ဆင်သူများ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းမဖြစ်မိစေရန်နှင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။
မှိုများနှင့်ပြည့်သော Veal Rolls
ကြက်ဥကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ပြီးတော့အားလုံးအထက်မှာ၊ ကျွန်တော်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအနည်းငယ်ကိုသုံးတဲ့အခါ ...
ညစာမစားမီသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရှိရန် aperitif ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ ငါတို့သည်သင်တို့အရသာနေသောဒိန်ခဲနှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်လိပ်အဘို့အစာရွက်ဆောင်ခဲ့။ …
ချောကလက်နှင့်ဗာဒံသီးများပြည့်နှက်နေသည့် Puff pastry roll
ဒီနေ့ငါပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်စာရွက်ကိုငါဆောင်ခဲ့မည်။ သငျသညျမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောအချိုပွဲကိုပြင်ဆင်ချင်လျှင်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဒီ၏ Roll ၏ ...
York Ham နှင့်ကင်ဒိန်ခဲလိပ်
တစ်နေ့ကျတော့မင်းကိုဒီနေ့ငါသွားနေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့စွဲမက်စရာတွေထဲကတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ ဒါဟာ flamenquines တူပေမယ့်ကျွန်တော်ဖယ်ရှားပစ်ကြပြီ ...
ချောကလက်ဖြည့်လိပ်။ ဒီအချိုပွဲနဲ့ချောကလက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရိုးရှင်းပြီးကြွယ်ဝတဲ့အိမ်လုပ်သကြားလုံးတွေ၊ မိသားစုကိုကျွန်တော်တို့အံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်။ သူတို့ကအရမ်းချိုတယ်
RON PONCHE (PANAMA ၏ပုံမှန်နည်းကျ)
အာဟာရ: အငွေ့ပြန်စေသောနို့2ဘူးခွံ IDEAL 1.200 ml ။ လတ်ဆတ်သောနို့ 450 ဂရမ်၏။ သကြား 50gr ၏။ vanilla သကြားသို့မဟုတ် * အရည် vanilla 30gr ။ 150
ဒီနေ့ရင်ခုန်စရာညစာအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာကိုငါပြမယ်။ သင်စမ်းကြည့်ချင်ပါသလား။ ဝိုင်ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ပဲစိတ်ပူနေတယ် ...
ပထမဆုံးနွေ ဦး လပြည့်ပြီးနောက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ခရစ်ယာန်များသည်အီစတာပွဲကိုကျင်းပကြသည်။ ဒီပွဲတော်အတွက် gastronomic အစဉ်အလာ ...
အိမ်လုပ်Roscón de Reyes
သုံးဘုရင်နေ့သည်အထူးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အိမ်၏အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာအစဉ်အလာများနှင့်အတူအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်သည် ...
ယနေ့ငါသင့်ကိုငါဆောင်ခဲ့သောဤစာသည်လုံးဝလက်ဖြင့်ပြီးသောရိုးရာချိုမြိန်မှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ anise လိပ်တွေအကြောင်း။ ချက်ပြုတ်တာကိုမတွေ့ရသေးသူ ...
အိမ်လုပ် anise bagels
အိမ်လုပ် anise bagels အီစတာရောက်ရှိလာပြီးယခုအချိန်တွင်သကြားလုံးများကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်အိမ်၌အလှဆင်ပစ္စည်းများစွာကိုကြိုက်နှစ်သက်သည်။
အိမ်မှာအီစတာလိုအနံ့ရှိနေဆဲပဲ။ အမှားကတော့ဒီလိမ္မော်လိပ်လိပ်အသစ်များ၊ ငါ့စာရွက်စာတမ်းထဲထည့်ရန်အသစ်သောစာရွက်ဖြစ်သည်။
Roscos del Ampurdánသို့မဟုတ် roscos de lent, Catalonia တွင်ဤအချိန်တွင်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင်မုန့်ဖုတ်နှင့်မုန့်ဆိုင်များကအမျိုးမျိုးသောဖြည့်ဆည်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည် - ဖြည့်စွက်ခြင်း ...
မနေ့ကမင်းကိုကျော်ကြားတဲ့ Torrijas အီစတာအတွက်ရိုးရာစာရွက်ကိုငါတို့ထားခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်, ပုံမှန်အစားအစာများနှင့်အတူဆက်လက်ရန် ...
ကြော် anise ဒိုးနက်
ငါတို့အဖွားတွေလိုမျိုးပြောင်းဖူးမှုန့်ကြိတ်မုန့်တွေအတွက်သင်စာရွက်ကိုသင့်ကိုထားလိုက်ပါ။ ဒီအမှတ်တရများသည်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သောအရာများဖြစ်ပြီး ...
ကြက်သား roti သည်ဒိန်ခဲနှင့်ရက်စွဲများပါ ၀ င်သည်
သူတို့ဟာအဖြူရောင် (သို့) မှောင်မိုက်သောချောကလက်နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းမှာပါဝင်ပစ္စည်းများမပါဝင်သည့်အတွက်ကိတ်မုန့် (သို့) pudding အမျိုးအစားအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။